Mirrors Nepal » क्रिकेटको इतिहासमै पहिलोपटक भारतमाथि नेपालको जित, दीपेन्द्र बने ‘नायक’ !
२६ कार्तिक २०७४ |
क्रिकेटको इतिहासमै पहिलोपटक भारतमाथि नेपालको जित, दीपेन्द्र बने ‘नायक’ !
२६ कार्तिक २०७४, आईतवार १५:५८
कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले शानदार अलराउन्डर प्रदर्शन गरेपछि नेपालले क्रिकेट इतिहासमै पहिलोपटक भारतमाथि जित दर्ता गरेको छ । मलेसियामा जारी एसिसी यु–१९ एसिया कपअन्तर्गत आइतबार अपराह्न सकिएको खेलमा नेपालले भारतलाई १९ रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै स्तब्ध पारेको हो ।
खेलमा १ सय ८६ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको भारत ४८.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १६६ रनमा अलआउट हुन पुग्यो । भारतका हिमांशु रानाले ४६, मान्जोत कोर्लाले ३५, अभिशेक शर्माले २७ तथा अर्थब तैडीले १३ जोडे पनि त्यसले टिमको हार भने टार्न सकेन ।
यता, नेपालका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सर्वाधिक ४ विकेट लिए । त्यस्तै, पवन सर्राफले २ विकेट लिएर भारतको ब्याटिङमा ध्वस्त पारेका थिए ।
त्यसअघि पहिला ब्याटिङमा उत्रेको नेपाली टिमका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ८८ रनको महत्त्वपूर्ण पारी खेले । नेपालले ५० ओभरको खेलमा ८ को नोक्सानीमा १ सय ८५ रन जोडेको थियो ।
नेपालका लागि सर्वाधिक ८८ रन जोडेका कप्तान ऐरीले १ सय १ बलको सामना गर्दै ६ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
ओपनर जितेन्द्र सिंहले ३६ तथा भीम सार्कीले १५ रनको योगदान दिए । मध्यक्रमबाट बाँकी खेलाडीले दोहोरो अंक जोड्न नसक्दा नेपालले भारतलाई मध्यमस्तरको लक्ष्य दिएको थियो । नेपालका लागि आसिफ सेखले ३, अनिलकुमार साहले ६, रोहितकुमार पौडेलले ६ रन मात्रै बनाउँदा सन्दीप लामिछाने ९, किशोर महतो ७ रनमा समेटिए ।
भारतका आदित्य थकारे र अभिषेक शर्माले समान २÷२ विकेट लिए । स्मरण रहोस्, क्रिकेटको इतिहासमा नेपालले भारतमाथि इतिहासमै पहिलोपटक जित निकालेको हो ।